Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta Oo Jimco Ah 6 May
HomeWarka Xiisaha LehWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maanta oo Jimco Ah 6 May
May 6, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Kylian Mbappe ayaa qarka u saaran inuu heshiis kordhin cusub u sameeyo PSG isaga oo sanadkii mushahar u qaadanaya 42.5 Milyan pound isla markaana abaalmarin ahaan loo siin doono 85 Milyan oo pound marka uu heshiiskaas saxeexo. (Le Parisien – in French, subscription required)
Hooyada Mbappe ayaa dhinaceeda been abuur ku sheegtay wararka sheegaya in wiilkeedu PSG sii joogayo iyadoo shaacisay inuusan wali go’aan gaadhin. (Mirror)
Pep Guardiola ayaa heshiis cusub u saxeexaya Man City ilaa 2025 isaga oo u sheegay kooxda inuu halkii ugu sarreysay ka joogo ka go’naanshaha ah inuu Champions League ku guuleysto. (Star)
Manchester City ayaa ka fikiraysa inay u dhaqaaqdo saxeexa khadka dhexe ee Barcelona ee Frenkie de Jong si ay ugu dhisto safkeeda xilli ciyaareedka dambe. (Mail)
Everton ayaa diyaar u ah inay iibiso goolhaye Jordan Pickford si ay uga hesho lacag ay xagaaga kooxdeeda ku dhisto, Tottenham iyo Newcastle United ayaa indho-indhaynaya xaalada 28 sano jirkaas. (Talksport)
Tottenham saraakiil ka socday ayaa daawaday kulamadii Champions League ee Villarreal la ciyaartay Liverpool iyaga oo isha ku hayay daafaca dhexe ee Pau Torres iyo garabka Arnaut Danjuma. (90 Min)
Tottenham iyo Leeds ayaa xiisaynaya garabka Wolves ee Adama Traore oo haatan amaah ku jooga Barcelona oo aan la filayn inay heshiis rasmi ah kula wareegto. (Team Talk)
James Ward-Prowse oo la aaminsan yahay inay kooxo Premier League ahi xiisaynayaan ayuu tababarihiisa Hassenhutl sheegay inuu Southampton sii joogi doono. (Southern Daily Echo)
Edinson Cavani ayaa sheegay inuu ka fikiri lahaa inuu ka tago Man United xagaagii hore haddii uu ogyahay inay Cristiano Ronaldo lasoo wareegayaan. (ESPN Brazil – in Portuguese)
Napoli weeraryahankeeda Victor Osimhen ayaa la sheegayaa inuu ku biirista Arsenal ka doorbidayo kooxaha Man United iyo Newcastle. (Gazzetta dello Sport, via Express)
Arsenal iyo Man United bartilmaameedkooda Paolo Dybala ayaa dalab ka haysta Borussia Dortmund marka uu dhaco heshiiskiisa Juventus xagaaga. (Corriere dello Sport – in Italian)
RB Leipzig ayaa doonaysa in Christopher Nkunku oo Man United bartilmaameed u ahi sanad kale sii joogo oo ay ka saxeexdaan heshiis cusub oo horumarsan kaddibna uu bixi karo sanadka dambe ee 2023. (Bild – in German)
Manchester United daafacyadeeda dhexe ee Eric Bailly iyo Jones ayaa asxaabtooda kooxda u sheegay inay ka tagayaan xagaaga Old Trafford. (Manchester Evening News)
Marcos Alonso lixda sano ee uu joogay Chelsea ayaa xagaag soo dhamaan doona xilli uu muhiimada koowaad siinayo ku biirista Barcelona oo xiisaynaysa. (Fabrizio Romano)
Giorgio Chiellini ayaa horyaalka Maraykanka tagi doona marka uu Juventus ka tago xagaaga. (Goal)
Leeds ayaa bartilmaameed ka dhiganaysa khadka dhexe ee Eintarcht Frankfurt ee Daichi Kamada. (Football Insider)
Sporting Lisbon ayaa dhaqan gelisay qodobkii u ogolaanyay inay rasmi ka dhigto heshiiska daafaca midig ee Pedro Porro oo Man City amaah ugaga soo maqnaa. (Fabrizio Romano)
Arsenal ayaa heshiis 5 ilaa 10 Milyan oo pound ah daafaca midig ee Hector Bellerin kaga iibin doonta Real Betis oo uu amaah najaxday ku qaatay kulana guuleystay Copa Del Rey. (Charles Watts)
West Ham ayaa dalabkii labaad ka gudbisay garabka Leeds ee Raphinha walow ay Barcelona tahay kooxda saxeexiisa ugu cad cad. (Sport – in Spanish)
Newcastle ayaa diyaar u ah inay 21 Milyan oo pound ku dalbato daafaca bidix ee Atletico Madrid ee Renan Lodi oo ay ku garaacdo Juventus oo dhinaceeda ka doonaysa. (Tutto Mercato – in Italian)